नेपाली शान दिवेश पोख`रेल अमे`रिकन आइडलको बने उप-विजेता !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/नेपाली शान दिवेश पोख`रेल अमे`रिकन आइडलको बने उप-विजेता !!
नेपाली शान दिवेश पोख`रेल अमे`रिकन आइडलको बने उप-विजेता !!
दिवेश पोखरेल (आर्थर गन) अमेरिकन आइ`डलको उप–विजेता बनेका छन् । अमेरिकन आइडलको १८ औं सिजनकी बिजेता भने २१ बर्षकी जस्ट साम बनेकी छिन् । आजको समापान शोमा टप फाइ`भमा पुगेका दिवेश भोटिङमार्फत टप टुमा पुगेका थिए ।
नेपाली समय अनुसार सो`मबार बि`हान भएको फि`नालेमा दि`वेश अन्तिम दुईमा पुगेका हुन् । उनले उपाधि भने जित्न सकेनन् । लगातार राम्रो प्रदर्शन गरेर दर्शक तथा निर्णायकको मन जित्न सफल भएका दिवेश फस्ट रनरअप अर्थात दोस्रो भए । जस्ट सामले उपाधि जितिन् । अमेरिकन आइडलमा फस्ट रनरअप हुने दिवेश पहिलो नेपाली मुलका गायक हुन् ।
दिवेश काठमाडौंमै जन्मिए, हुर्किए, उनी बच्चैदेखि गुन्गुनाउँथे, गिटार बजाउन खोज्थे, जबकी उनको परिवार र आफन्त कोही संगीत क्षेत्रमा थिएनन् । उनको परिवार सन् २००८ मा अमेरिका बसाइँ सर्‍यो तर पढाइका कारण उनीचाहिँ सन् २०१४ तिर अमेरिका गए ।
दिवेशले सन् २०१९ को जनवरीमा नेपालमै आफ्नो ग्रहण एल्बमको लोकार्पण गरेका थिए । अर्थर गनका नाममा युट्युब च्यानलसमेत बनाएका उनका एक दर्जनजति गीत छन् । अर्को वर्ष ‘खोज’ एल्बम ल्याए । यसको शिर्षसहित ‘म…’ र ‘कर्णाली…’जस्ता गीतले धेरथोर चर्चा कमाए । बब डिलन, निक डार्क र बुक्का ह्‍वाइटलगाएतका संगीतकर्मी उनका आर्दश हुन् । उनले संगीतको औपचारिक शिक्षा भने लिएका छैनन् ।
१७६ जना यात्रु रहेको बिमानलाइ इरानले खसालेको स्वीकार गरेपछि, क्यानेडाले लिय कडा एक्सन !!
हिमानीलाई लिपु-लेकको कुराले रुन आउँछ ? भारतकि छोरी नेपाल`कि बुहा`रि (भिडियो हेर्नुहोस )
सिंगो संसद तरंगित गर्ने राजेनन्द्र र उपेन्द्रको दमदार भाषण, जिते ३ करोड नेपालीको मन (भिडियो)